राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा कोभिड अस्पताललाई १४ लाख २५ हजार सहयोग - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा कोभिड अस्पताललाई १४ लाख २५ हजार सहयोग
राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा कोभिड अस्पताललाई १४ लाख २५ हजार सहयोग
डी. आर. बन्जाडे आईतबार, २०७८ जेठ २३ गते, १०:२३ मा प्रकाशित
बुटवल—रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा संचालनमा रहेको कोभिड अस्थायी अस्पतालका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदले आर्थिक सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाले पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय, वनकट्टामा संचालन गरेको कोभिड अस्पतालका लागि परिषदले १४ लाख २५ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो ।
अक्सिजन सिलिन्डरका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको परिषद सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बाबुराम बन्जाडेले बताए । ‘परिषदको सामाजिक उत्तरदायीत्वअन्तर्गत हामी यो आर्थिक सहायता प्रदान गरेका छौँ । यस्ता गतिविधिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ,’ उनले भने ।
कोभिडका बिरामीका लागि आवश्यक हुने ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि सो रकम प्रदान गरिएको उनले बताए । ‘प्रतिसिलिन्डर २८ हजार ५ सय पर्ने रहेछ सोही अनुसार ५० वटा सिलिन्डरका लागि आवश्यक रकम दिइएको छ,’ उनले भने ।
सैनामैनामा ५० शैय्याको कोभिड—१९ अस्थायी आइसोलेशन संचालनमा रहेको छ । अक्सिजन अभावमा समस्या भैरहेका बेला परिषदले गरेको सहयोगले जीवन वचाउन सकिन्छ भन्ने आशा बढेको सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रवहादर कार्की बताउँछन् । ‘महामारीको समयमा कसरी सहयोग हुन्छ त्यसरी नै सहयोग गर्ने हो । सहकार्यबाट नै विपदको सामना गर्न सकिन्छ । नगरपालिका समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
परिषदसँग रकम प्राप्तीका लागि नगरपालिकाले गत जेष्ठ १९ गते सम्झौता गरेको थियो । कोभिड—१९ को विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै परिषदले रकम उपलब्ध गराएको हो ।
कोभिड—१९ का बिरामीको सरल र सहज उपचारका लागि अतिआवश्यकीय मेडिकल समाग्री खरिदमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखी संझौता गरिएको छ ।
अस्पतालका लागि ६५ केजीका ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि भएको सम्झौताअनुसार रकम प्रदान गरिएको बन्जाडेले बताएका छन् ।